Dookh Iyo Doorasho - Qaybaha 1aad -3aad. - Boga Wise Man
Dookh Iyo Doorasho – Qaybaha 1aad –3aad.
April 3, 2020 qawdhan
Wuxuu kacay subaxaas xilli hore.
Fikir badan oo bilo qaatay kadib waxa uu xalay go’aansaday inuu guursado.
Wuxuu isagoo cadaygii afka ku sita dibada ula baxay laptop-kii.
Waxa la gaadhay xiligii uu ku dhaqaaqii lahaa qorshihii uu labada sano diyaarinayay.
Wuxuu furay folder-ka la yidhaa Future. Waxa ku jira 2 Excel file iyo hal Word file.
Excel file-ka hore waxa la yidhaa Dookh-A. Ka labaadna Dookh-B. Word file-kana waxa la yidhaa Dookh A.B.
Labada Excel file midkasta waxa ku keydsan 50 hablood macluumaadkooda. Halka Word file-ka uu ku jiro gabadh kasta qoraal kooban oo dabeecadeeda ka hadlaya. 1 qoraal iyo 1 sawir gabadhkasta oo boqolka gabdhood kamida.
Waxa la gaadhay wakhtigii uu ka xulan lahaa.
Wuxu furay Excel file Dookh A….
Dookh A ayuu furay. Waxaana uu isha mariyey xogtii ku urursanayd. Magaca, da’da, telefanka, qiimaynta quruxdeeda, heerka waxbarasho, maadada ay baratay, celceliska likes-ka sawiradeedu ka helaan facebook iyo Instagram iyo niyadiisu halkay ka taagantahay.
Dookh A waxa ku jira 50 hablood oo uu isaga ku weyn oo aan badankoodu damaciisaba ogeyn. Halka Dookh B uu ku kaydiyey 50 isaga jecel oo qaarkood guur ka dalbadeenba dhawr jeer.
Hadii runta la sheego dhanka quruxda Dookh A ayaa ka sareeya Dookh B. Balse dhanka dabeecada, is fahanka iyo edabtaba Dookh ayaa kaga horeeya Dookh A.
Waxase uu rabaa Maygaag inuu hubsado oo iyagoo og ama aan ogeyn imtixaan mariyo.
Waxa uu eegay Word file A.B inanta koobad, qaybta Dookh A.
Sadia: 21 jir degan Hargeysa. Quruxdeedu waa 8.2. Sawiradeedu waxay helaan 100 illaa 160 like. Kuma badna facebook waxayse ku badantay Instagram. Qoraalkeedu ma badna. Aroos tegisteeduna ma badna. Asxaabteedu way koobantahay. Waxbarashada ma xiisayso.
Maygaag cabbaar markii uu daawaday hablihii ku jiray Dookh A ayuu u gudbay oo furay Dookh B. Gabdhaha ku jira Dookh B qurux ahaan uma dhigmaan kuwa jira Dookh A, balse aqoon ahaan, dabeecad ahaan, iyo sheeko ahaanba way uga sareeyaan gabdhaha Dookh A ku jira.
Waxa ugu horeysa Dookh B gabadh la yidhaa Nimco, da’deedu waa 26 jir, ka qalin jabisay Jaamacad Malaysia ku taala oo soo baratay cilmiga maamulka iyo maaraynta. Nimco waxay leedahay shirkad u gaara oo consultancy ah waxaanay qandaraasyo ka qaadataa shirkadaha ganacsi ee waaweyn marmarna hay’ado ama dawladaaba hawlo u dirsata. Nimco qurux ahaan waa 6. Laakiin lebis iyo xarago ayay dad badan ku dhaaftay. Maygaag iyo Nimco way is yaqaanaan balse waa aqoon guud oo marna wax gaara kamay wada hadal.
Waxa uu kolba file akhriyo aakhirkii waxa uu Dookh A ka helay gabadh uu dhaafi kari waayay. Maadaama uu ugu talo galay in gabdhaha uu si cadaalada u kala saaro isagoo dantiisa iyo dookhiisaba miisaamaya ayuu is yidhi ku bilow inantan.
Gabadha 29 aad ee Dookh A ku jirta ayuu dhaafi kari waayay. Magaceedu waa Hoodo da’deeda waa 25 jir. Waxa ay ka timid dibada gaar ahaan dalka Ingiriiska. Waxa ay u shaqaysaa Hay’ad la yidhaa Women Power. Quruxdeedu waa 9.1 waa gabadh intuu Maygaag gabadh kaydsanayay ta ugu qurux sareysa.
Maygaag Hoodo waxa uu ku arkay lix bilood ka hor sawir ay gabadh kale ku tag gareysay. Kadib halkii ayuu kasii raacay account-keeda facebook. Inkastoonay wax badan soo dhigin oo badanaa waxay soo sawirtaa u badan yihiin buugta badan ee ay akhrido markay u kala dhoofayso London iyo Hargeysa hadana marmar ay soo dhigto sawir wuu save-gareystaa Maygaag. Maygaag marna Hoodo fariin ugamuu dirin facebook. Waxase uu go’aansaday in uu horta fool ka fool ula kulmo oo ay isu bartaan kadibna haduu ka helo uu guursado.
Maygaag kalsoonida uu naftiisa iyo raganimadiisa ku qabaa xataa ismuu weydiin bilay ku diidaa.
Inkastoo Maygaag kalsooni badnaa hadana waxa kalsoonida geliyey wuxuu ahaa nin yaqaan sida dhibaatooyinka loo xaliyo oo aad u yaqaan deberida hawlaha. Arrintana wuxuunbuu u arkay hawl uu debiri karo.
Intuu laptop-kii ka kacay ayuu isyara kala bixiyey.
Saacadu markaa waxay gaadhay illaa 8-dii subaxnimo. Guriga ayuu dib ugu noqday kadibna wuu maydhay oo quraacday.
Maygaag intii uu maydhanayay ayaa waxa kusoo dhacday fikirkii uu Hoodo ku baran lahaa. Isagoo xunbadii saabuunta leh ayuu qoslay.
Wuxuu xasuustay saaxiibkiisii ciyaalnimadii. Wuxuu xasuustay Deyr.
Deyr waa mid kamida dhalinyarada aadka u asxaabta badan. Sheekh iyo shariifba wuu yaqaan.
Maygaag waxay la noqotay in uu saaxiibkiisii hore ee ay kala baadeen ka codsado inuu baro inantaa.
Koley Deyr wuu garanayaa inanta ayuu is yidhi Maygaag.
Quraacdii kadiba wuu wacay numberkii hore ee Deyr. Mise wuu dhacayaaba.
Afar jeer markii uu dhacay ayaa la qabtay.
“Haa ma Deyrbaa?”
“Haaye waa kuma?”
“War waa Maygaage ii waran saaxiib?”
“Maygaag aa, ma Maygaagiino?”
“Haa saaxiib waa anigiiye ii waran waynu kala baadnee”
“Adduunyo wallaahi niyow yaa kaa fiican maanta. Waan fiicanahay saaxiib ee ii waran nin la waayay”
Waxoogay markay is xaal wareysteen ayuu Maygaag ka codsaday in ay kulmaan weliba si degdeg ah. Isla galabnimadii ayay balameen inay ku kulmaan Time and Space coffee shop.
Isla markii uu telefanka ka dhigay Maygaagba, waxa uu wacay Sacad. Deyr inkastuu ku farxay in uu saaxiibkii lasoo xidhiidho waxa uu iska garanayay in koley saaxiibkii hawl weyn ula imanayo Sacad-yarena waxa uu u wacay inuu kulanka wax ka barto.
Sacad waa wiil yar oo gacan yare u ah Deyr oo ay isku xaafad degen yihiin. Labadooduba waxay degan yihiin Goljano.
Inyar kadiba Sacad ayaa u yimid Deyr oo gurigiisii fadhiya. Deyr oo dhoola cadeynaya ayaa uga waramay in ninkii uu uga sheekayn jiray ee ay saaxiibka ahaayeen ee maskaxda badnaa uu arrin uga soo baahday.
“Ma ninkaad odhan jirtay haduu rabo wadanka Madaxweynuu ka noqonayaa ee isagaan rabin”
“Haa isaga laftarkiisa, waxaan filayaa muddo sanad ah ayuu joogaa saan jecelay shaqo fiicana wuu helay, Hindiyuu ku maqnaa 6 sano soo kuumaan sheegin wuxuu soo bartayna saan filayo computer science”
Sacad baa intuu madaxa lulay u sheegay inuu uga waramay laakiin aanu saani u wada xasuusan.
“War adna ilawshiyo ayaa lagugu qaatay adoo wiil yaree galabta waad ii raacaysaa, maqaaxidii Time and Space ayaynu kula balansanahay kaalay bal aad wax ka fa’iidid Maygaagiinee”.
Maygaag maadaama uu saaxiibkii Deyr ku kalsoonaa si ay hawshu ugu suurto gasho waxa uu go’aansaday inuu arrinka u wada sheego. Waayo Deyr waxa uu ahaa ninka kaliya ee ay sida fiican u yaqaanaan.
Dadku badanka Maygaag waxay moodaan nin iska caadi ah. Laakiin Deyr waa qofka kaliya ee uu is yidhi hadii cidi kaa horeyn karto ninkaasaa kaa horeeya. Maygaag nasiib xumo ayuu u arki jiray in Deyr oo sidiisa maskax badani aanu laakiin sidiisa han sare lahayn.
Maygaag wuxuu is yidhi intuu Deyr moodi lahaa inaad ku guurayso, koley wuu ku fahmayaa arrinkaad rabto u wada sheeg. Laptop-kiisii ayaabu qaatay markuu salaada casar kusoo tukaday masaajidka kadib waxaanu gaadhigiisii yaraa Maygaag u kaxaystay dhankii maqaaxidii Time and Space.
Sidii uu filayay Maygaag markii ay saacadu gaadhay 5-tii galabnimo ayuu soo istaagay gaadhigii Deyr. Maygaag waxa uu arkay in Deyr uu weheliyo wiil dhalinyaro ah oo gaaban oo cas.
In muddo ah ayay taagnida kuwada hadleen oo kolba laabta is geliyaan. Aakhirkii way fadhiisteen waxaanay dalbadeen bun.
Cabbaar markii ay ka sheekeeyeen waayo waayo iyo taariikho ay soo wada mareen ayuu Maygaag arrinkii gudo galay. Intuu laptop-kiisii shiday ayuu u dhiibay Deyr markaasuu u sharaxay. Deyrbaa qoslay oo yidhi ma sidan ayaad rabtaa inaad xaas u doorato. Iyo haa ee adigu gabadhaas ma I bari kartaa.
Maygaag baa u tilmaamay Hoodo.
Ninkii Deyr indhahaa soo baxay. Markiiba waxa uu Maygaag dareemay in Deyr gabadha gartay.
Lasoco qaybta dambe…
deyr dookh doorasho Jacayl maygaag Sheeko somali
Previous Post Roob iyo Sonkor – Qaybtii 4aad
Next Post Dhaqaale Aqoon Ku Dhisan